Izintela ezikhishwa ngaphandle zaseRussia zizokwenyuka izikhathi ezi-2,5 - iChina Foshan Hermes Steel
Izintela ezikhishwa ngaphandle zaseRussia zizokwenyuka izikhathi ezi-2,5
I-Russia inyuse amanani ayo okuthekelisa ngensimbi eyilahliwe izikhathi ezingama-2,5. Izindlela zezimali zizosebenza kusukela ekupheleni kukaJanuwari isikhathi esiyizinyanga eziyisithupha. Kodwa-ke, uma kubhekwa izintengo zamanje zezinto ezingavuthiwe, ukwanda kwamanani entengo ngeke kuholele ekumisweni okuphelele kokuthunyelwa kwamanye amazwe, kepha ngezinga elikhulu, kuzoholela ekwehleni kwenzuzo yokuthengisa okuthekelisa. Izinga lentengo eliphansi kakhulu lokuthekelisa lingama-euro angama-45 / ithani esikhundleni samanje esingu-5% (cishe ama-euro ayi-18 / ithani ngokususelwa kuzintengo zamanje zemakethe yomhlaba).
Ngokwemibiko yabezindaba, ukukhushulwa kwamanani entengo kuzodala ukwehla okukhulu kwemikhawulo yokuthengisa yabathengisi, kanti izindleko zabathengisi zizokwenyuka cishe izikhathi eziyi-1.5. Ngasikhathi sinye, ngenxa yezinga eliphezulu lezingcaphuno zamazwe omhlaba, kulindeleke ukuthi inani lezinsimbi ezilahliwe ezithunyelwa ezimakethe zakwamanye amazwe ngeke lehle kakhulu ngokushesha ngemuva kokuthi kuqale imithetho emisha (okungenani ngoFebhuwari). “Inkinga yokuthengwa kwempahla inkulu kakhulu ezimakethe zensimbi ezilahliwe. ITurkey ingabhekana nokushoda kwezinto zokusetshenziswa ngoFebhuwari. Kodwa-ke, ngicabanga ukuthi ukusetshenziswa kwale ntela, ikakhulukazi esimweni sokushoda kwezinto ezibonakalayo, ngeke kuyikhiphele ngaphandle ngokuphelele iRussia njengomhlinzeki. Ngaphandle kwalokho. Lokhu kuzokwenza ukuthi kube nzima ukuhweba eTurkey, ”kusho umhwebi waseTurkey exoxa nabezindaba.
Ngasikhathi sinye, njengoba ababambiqhaza bezimakethe ezithunyelwa kwamanye amazwe bengangabazi ngokuqaliswa kwezintela ezintsha, ngasekupheleni konyaka, intengo yokuthengwa kwetheku izobe isinqunyelwe kuma-ruble / amathani ayi-25,000-26,300 (ama-338-356 amadola aseMelika / ithani) Amachweba we-CPT, azonika amandla ukuthengisa okunenzuzo. , Futhi wenyuse amanani.